Goatemalà: Mankalaza ny Andron’ny Tany sy ireo Fomba Fitandrovana azy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2019 12:30 GMT
Sary nalain'i Ivan Castro ary nampiasaina teo ambany fahazoandàlana Creative Commons.
Avy amin'ny teny Maya iray midika hoe “ilay tanin-kazo” ny anaran'i Goatemalà. Hetsika amin'ny alàlan'ny teny no fomba iray hamaritako ny fanahy entin'ireo bilaogera mitantara amin'izao tontolo izao ny zavatra ataony ho fiarovana sy fanavotana ny planeta. Miainga amin'ireo governemanta kely ao an-toerana ka hatrany amin'ireo vahoaka miasa an-tànan-dehibe, maro ireo bilaogera no mahatsapa ny momba ny tontolo iainana ary mitantara amin'izao tontolo izao ireo ohatra sasany amin'izay azontsika atao, araka ny voalazan'i Mr. Man:
Mbola mamokatra etona CO2 ny ao Goatemalà, Meksika sy ireo firenena hafa ao Amerika Latina, ary manao an-tsirambina ny fanairana ireo firenena ireo, ny vahoaka aza moa dia tsy mahavita mandray andraikitra rehefa tsy misy hidiran'ny Fanjakana ao amin'ny firenena tsirairay izany. Ny krizin'ny angovo no toy izao dia noho ny fitondrantenantsika ratsy, ary ankehitriny isika tsy miraharaha ny fiakaran'ny maripanan'ny tany, ary misy toejavatra ratsy kokoa mananontanona, tsy afaka mihemotra intsony. Izao no tontolon'ny ampitso, izay hiainan'ny taranaka any aoriana.
Kanefa misy ihany koa ireo hetsika kely ataon'ireo governemanta ao an-toerana. Manoritsoritra ny hetsika ataony ny bilaogy iray tantananà governemanta kely ao Quezaltepeque:
Anivon'ireo ala samy hafa, manana isika ny Santa Teresa, ny Yokón ary ilay iray akaiky an'i San Juan, ao amin'ny vohitra “Muffins”, izay nambolena hazo sy nandraisana ireo fepetra ilaina rehetra hiarovana ny zavaboarintsika amin'ny afo.
Anivon'ireo lahatsoratra samy hafa ity iray avy amin'i El Diario del Gallo ity,
Heveriko fa niseho ny fankalazana voalohany ny tany rehefa faly ny lehilahy na ny vehivavy voalohany avy aminà vondrompiarahamonina tany am-piandohana fa nahita rano hosotroina, afo handrahoana, hafanàna, tany hambolena, rivotra nandio azy rehefa nivoaka ny lavabato nisy azy izy ka nifoaka izany ary nahatsiaro nohavaozina. Izany rehetra izany sy ny mbola maro hafa koa dia nomen'ny Tany avokoa. Ny fankalazàna ny Tany tafiditra anatinà paikady fampirisihana sy fampianarana hiaro ny tontolo iainana, kanefa ilaina ny fanovantsika ny fomba fiainantsika sy ny fomba fandaniantsika, amin'ny maha olompirenen'izao tontolo izao sy an'ny firenentsika antsika. Ilaina ny miaro ny lova voajanaharintsika ary ambonin'izany rehetra izany, “ny rano”.
Naneho hevitra momba anà Loharano Voajanahary iray tsy tsaroana ny El Blog de Rudel , bilaogy voalohany indrindra ao Peten, ilay faritra midadasika indrindra ao Goatemalà, ary manahy ny momba izany izy satria loharano iray goavana ho an'ny Planeta izy io:
Omaly, nisidina ambonin'ny faritr'i Chiquibul aho, valan-javaboary ampahan'ny Rafitry ny Faritra Voaaro ao Goatemalà, ao afovoan'ny sisintanin'i Belize. Aty amin'ny misy anay, misy ireo vondrompiarahamonina toy ny Carrizal, El Limon, Los Olivos anivon'ireo hafa, ary ny aty aminay no mampiseho fahasimbàna betsaka kokoa. Ho an'i Belize, Chiquibul no valan-javaboariny midadasika indrindra ary voatahiry tsara izany. Kanefa samy mety ho lasa toerana fanaovana fizahantany avokoa izy roa ireo, indrindra ho an'ny fizahantany famakivakiana toerana, satria tsara hanaovana fizahana lavabato ilay faritra, na hilasiana, na hitaingenana zahatra, anivon'ireo fisarihana hafa. Ito no filaharan-davabato lehibe indrindra manerana an'i Amerika Afovoany. Ao amin'ny Farihin'i Goatemalà, misy lavabato goavana izay andalovan'ny Renirano Chiquibul ka mipoitra eo amin'ny 20 kilometatra mankany avaratra eo ho eo… Manahy aho fa very ny tontolo iainantsika. Ny tahirin-javaboarin'ny Maya irery ihany no resahan'ny haino amanjery, saingy adinontsika kosa ny ivon'i Petén sy ilay toerana kanto nosoritsoritako tetsy aloha.
Mihamatotra ihany koa ny momba ny fiakaran'ny maripana maneran-tany, na fara-faharatsiny ny ao an-toerana. Araka ny voalazan'ny El Zacapaneco, tsy nisy ho kianina ny toetrandro tao Goatemalà tanatin'ny taona iray manontolo, kanefa ankehitriny, mafana, mando sy miharatsy izany. Lehilahy iray no maty vokatry ny toetr'andro diso nahamay.
Mandefa famantarana mazava amintsika ny Planeta ary tena afaka mitondra fanovàna ny hetsika madinidinika. Fahavoazana ho an'ireo olompirenen'izao tontolo izao ny tombambidin'ny firenena toa an'i Goatemalà, midika hoe “tanin-kazo”, izay tsy maintsy hanapahan'ny olona ny ala tropikaly tsara tarehy satria tsy manan-tsafidy hafa hameloman-tena ry zareo. Na izany aza, manome sosokevitra amin'ireo hetsika madinika mety hiafara amin'ny fanovàna goavana ireo bilaogera.